Ukuzijabulisa ngeFlash | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 19, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Umsebenzi muhle kakhulu manje futhi sengivele ngingemuva ekwakheni izidingo zokukhishwa kwesoftware ethile. Ngenxa yalokhu, anginakho okuningi engingabhala ngakho kusihlwa, ngakho-ke ngidlale ngefayela le-flash engilithole kumngane futhi ngalilungiselela ibhulogi yami. Ngiyethemba uyayithanda!
Isikhathi sokungena emoyeni weholide! Uma ungathanda ikhophi lefayela loqobo lalokhu, lapha Hamba! Sibonga ngokukhethekile kumngane wami onethalente elimangalisayo, Michael, ngokwabelana nge-Flash file yasekuqaleni!